ရြမ်းလက်နက်ကိုင်အဖြဲႚ ဥက္ကှူ ဗိုလ်ခဵြပ်ဆေထင် မဵက်စိဝေဒနာ ကုသခြင့်မရသေး — မြန်မာဌာန
အက်စ်အက်စ်အေ ရြမ်းူပည်ေူမာက်ပိုင်းအဖြဲႚ ဥက္ကှူ ဗိုလ်ခဵြပ် ဆေထင်ကို အခမ်းအနားတခုတြင် တြေႚရသော မြတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: Courtesy of Shan Herald Agency for News – S.H.A.N.)
(Photo: Courtesy of Shan Herald Agency for News – S.H.A.N.)
မဵက်စိကုသခြင့် မရသေးတာနဲႛ ဗိုလ်ခဵြပ်ဆေထင်ရဲ့ လက်ရြိခံစာနေရတဲ့ မဵက်လုံးဝေဒနာနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ရြမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးခြန်ဆိုင်းက အခုလို ေူပာပၝတယ်။
ဦးခြန်ဆိုင်း။ ။ “အခု သူတိုႛ ခြင့်တောင်းထားတာ လနဲႛခဵီရြိန္ဘေပီ အခုထိကို ဘာမြ ခြဲစိတ်ကုသခြင့် ရတယ်ဆိုတာ မုကားရသေးဘူး၊ အဲဒီတိမ်စြဲတာ သိပ်္ဘပီးတော့ စိုးရိမ်ရတာပၝ အခုသူက ဘာအရောင်မြ သူကခြဲူခားလိုႛမရဘူး ူဖစ်နေတယ်၊ သူက ရောဂၝ ိံြစ်မဵိြး အသက်ငယ်ငယ်ကတည်းက အဝေးမြန်ူဖစ်နေတာကိုး၊ အခုကဵတော့ အနီးမြန် ူပန်ူဖစ်တယ်လေ နောက်္ဘပီးတော့မြ တိမ်လည်း ူပန်ူဖစ်တယ် ဆို္ဘပီးတော့မြ တော်တော် ဒုက္ခရောက်တာပေၝ့။”
အဲဒီလို မဵက်စိဝေဒနာခံစားနေရတာ နေူပည်တော်အထိ ကုသခြင့်တောင်းထားတာ တိံြစ်ကေဵာ် ုကာလာပေမဲ့လည်း အခုထိ ဘာမြ အေုကာင်းမူပန်သေးဘူးလိုႛ အက်စ်အက်စ်အေေူမာက်ပိုင်း အဖြဲႚက အမည်မဖော်လိုတဲ့ အရာရြိတယောက်ကလည်း ေူပာပၝတယ်။ မ္ဈိံလေးတိုင်း မတ္ဇရ္ဘာမိြႚက ူပည်သူႛလြတ်တော်ကိုယ်စားလြယ် ဦးသန်းလြင်ရဲ့ မဵက်လုံးတဖက်လည်း သံလက်သီး ထိုးခံထားရတဲ့ ဒဏ်ရာနဲႛ ထောင်ထဲမြာ စနစ်တကဵ ဆေးကုသခြင့်မရတာေုကာင့် မဵက်လုံးတဖက် ကြယ်သြားခဲ့ ပၝတယ်။ အလားတူပဲ ဗိုလ်ခဵြပ်ဆေထင်ရဲ့ မဵက်စိဝေဒနာကို အခဵိန်မြီ စနစ်တကဵ ကုသခြင့်မရဘူးဆိုရင် မဵက်လုံးိံြစ်ဖက် ကြယ်သြားတဲ့အထိ စိုးနေရတယ်လိုႛ အက်စ်အက်စ်အေ အရာရြိတယောက်က ေူပာပၝတယ်။